Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Egwu nke COVID-19 Ọdịiche dị na ọdịda
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Higherlọ Ọrụ Ahụ Ike Kasị Elu (HIH) na istali na-ebuli mkpu mgbe ọnụ ọgụgụ ụlọ ọgwụ na-adị ala. Onu ogugu nke oma bu ihe na-eme ka egwu COVID-19 di iche iche Kappa na Delta, nke kachasi, nke sitere na 5.2 percent na May rue 27.7 percent June.
Akuko ohuru sitere na HIH gbasara mgbasa nke ndi di iche iche na-acho ka "ugwo buru ibu" ka a kwugharia na mgbasa nke ndi ozo ndia.
A na-atụ aro ọgwụ mgbochi nke atọ iji lụsoo ụdị dị iche iche nke COVID-19 a ọgụ.
N'ọnwa Ọktọba, a ga - eweghachi ọrịa mgbasa, dị iche na 2020, ọkachasị ndị na - anaghị ọgwụ mgbochi ga-ejedebe na nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ.
Onye isi General Prevention of Prevention of the Italy Ministry of Health, Gianni Rezza kwuru, "Nke atọ nke ọgwụ mgbochi ahụ dị na amụma ahụ, mana anyị amaghị mgbe na onye."
"Vaccingba ọgwụ mgbochi nke atọ megide COVID-19 na-amụ ihe, ọbụlagodi na anyị amatabeghị mgbe, otu, na maka onye," Rezza kọwara n'oge mkparịta ụka ndị nta akụkọ gbasara nyocha nke data gbasara nyocha mpaghara mpaghara COVID-19.
"N'ọnwa Ọktọba, a ga - eweghachi nrugharị nke nje, dị iche na 2020, ọkachasị ndị na-anatabeghị ọgwụ mgbochi ga-ejedebe na nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ," ka Undersecretary for Health, kwuru, bụ Pierpaolo Sileri. “Ihe ize ndụ dị na ya bụ na nje ahụ na-agbasa n’etiti ụmụaka na-enweghị ọgwụ mgbochi na [ndị] karịrị afọ 60, na ndị nke ọzọ nọ n’ihe ize ndụ nke ịbụ onye a ga-ejedebe na nlekọta kpụ ọkụ n’ọnụ. Ka ịnwụ nke coronavirus nwere ọgwụ mgbochi yiri m nzuzu. Anyị nwere ngwa ọgụ iji zere ịnwụ na afọ gara aga enweghị. ”
Delta dị iche: Ihe Mara
Delta dị iche iche, nke nwere nje virus nke na-efe efe karịa 60 pasent karịa nje ndị ọzọ na-efe efe, nọkwa na ịrị elu n'Italytali dịka data si n'aka Ministry of Health na Higher Institute of Health na nyocha kwa izu.